Baarlamaankii Fadaraalka Soomaaliya oo la fasaxay iyaga oo aan kulmin. – Idil News
Baarlamaankii Fadaraalka Soomaaliya oo la fasaxay iyaga oo aan kulmin.
Warqada fasaxa ee xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa waxaa la ogeysiiyay Golaha Wasiirada Soomaaliya, Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Sida aynu la socono madaxweynaha iyo RW Soomaaliya,ayaa waqti badan iyo hanti badan geliyey sidii Golaha Shacabka looga dhigi lahaa mid hawlgab ah,
Arrintaas ayaa dhalisay in Gudoomiye Jawaari lagu cadaadiyo inuu is casilo. Dad badan ayaa arrintaan markii laga digayey u haystay in Dawladda la mucaaradayey.
Waraaqda halkan ku lifaaqan ayaa markhaati ka inuu bilowday qorshihii loo maleegay Baarlamaanka.
Xeel dheerayaal Sharci yaqaano ah ayaa caddeeyay in si kalfadhiga loo xiro ay lagama maarmaan tahay in uu Kooramka Goluhu uu xaadir ku yahay gudaha Baarlamaanka,hoos ka akhriso..
Halkan ka akhriso wareegtada